Qayb 2aad ma Taqaan Cibaado Maxamed Tarabi? – Rasaasa News
Mar 19, 2010 cibado, Dr. Dolal, inadhuubo, Jwxo-shiil
Afeef: hadii uu ruuxu siyaasad galo laguma tixgaliyo jinsiga uu dadka ka yahay ee waxaa loola dhaqmi ruux siyaasi ah.Sidii aan idiinku balan qaadnay qaybtii 1aad, waxaanu idiin soo daynaynaa sheekadii dhexmartay wariyaha rasaaa.com u jooga Scandinavian countries iyo Cibaado ee ku saabsanayd xogtii ay ka haysay dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal iyo waliba xidhiidhkooda.
Inta aynaa bilaabin waxaan ku kabaynaa wax yar oo ah wada dhalashada ka sokow aqoonta ka dhaxaysay Cibado iyo Dr. Dolal. Cibaado waxa ay ka mid ahayd gabdhihii tababarka u tagay dalka Eritrea, ka gadaalna dib ugu soo noqday dhulka Somalida Ogadeeniya.
Marka laga reebo dhag ka maqalka cibaado, Dolal, waxaa ugu horaysay xeradii tababarka ee Galaal xoor ee ku taalay musawac. Hadaba, Dr. Dolal iyo Cibaado waxaa xigtay oo ay isku arkeen Nairobi Kenya 2008, xiligaas oo ay wada socdeen Dr. Dolal iyo ku xigeenkiisii xiligaas Eng. Salax Cabdiraxman.
Dr. Dolal iyo Salax, waxaa u yeedhay in ay arkaan N/hurayaal badan oo joogay xeryaha qaxootiga ee Kenya, kuwaas oo kuligood si qaabdaran uu ula dhaqmay Bashiir Axmed Makhtal, kana soo qadh go,ay halgankii ay ku tiir iyo tacabka beeleen. Xiligaas waxaa uu xidhiidh fiican oo hasaawe guur dhexyaalay Cadaani [Ina Dhuubo] oo Eritrea joogay iyo Cibaado, kaas oo ah kan keenay maanta in Cibaado Sweden timaado. Dad badan oo ahaa dadkii Eritrea tagay waxaa lagu sameeyey xaalada rogid maskaxda ah ee afka qalaadna loo yaqaan [hypnotherapy], arinkaas oo ay aafadiisu ummada Somalida Ogadeeniya aad u saamaysay.
Cibado safarkii Dr. Dolal uu Nairobi kaga tagay Cibaado bas bay isla raaceen, waxayna u sheegtay in ay Garisa u socoto, laba habeen kolkii uu Garis joogay ayuu safar kale u galay xerada xaqootiga ee dhadhaab boosteejadii basaska ayey mar labaad ku kulmeen Cibaado iyo Dr Dolal oo isku meel u safar ah sida ay noo sheegtay Cibaado. Markan waxaa Cibaado la socday nin la yidhaahdo Kamas Dhabar oo ah Gumcadle, waa sida ay noo sheegtay Cibaado.
Cibaado waxay qiratay iyada oo ka xun in iyada iyo Kamas Dhabar laga soo amray Eritrea, oo ay kala soo hadleen Indhuubo iyo Jwxo-shiil, waxayna u soo xawileen lacag US$1000, si ay u fuliyaan hawl N/hurenimo ah oo lagu fulinayo Dr. Dolal iyo Eng. Salax, marka ay gaadhaan xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Cibaado waxay sheegtay in Falkaasi dhacay balse uu dhicisoobay, doorka ay iyadu ku lahaydna uu ahaa isku xidhka dhalinyarada faldambiyeedka fulinaysay iyo hubsashada halka ay Dolal iyo Salax u hoydaan.
Waxay tidhi Cibaado “aroornimadii ayuu Dr. Dolal ii yeedhay, kolkii aan arkay isaga oo nool, waxaa iga duulay wixii maskaxda la iigu shubay waanan naxay.” wuxuu i waydiiyey nimanka falka fuliyey” waan u sheegay ninka madaxda ka ahaa telefoonkiisana waan siiyey, waxay tidhi aniga oo la taagan ayuu Dr. Dolal diray telefoonka Kamas Dhabar, Dr. Dolal ayaa waydiiyey Kamas “adeer maxaan dambi ah oo aan sameeyey oo aad in aad i disho u doonaysay,”. Kamas wuxuu ku jawaabay “adiga in aan ku dilo ma doonaynin oo reer warfaa baanan ka lug baxaynin ee waxaan doonayey in aan dilo reer xamarka bahgari ee kula socda,” kolkaas ayuu Dr. Dolal yidhi “maxaa dambi ah oo uu isagu galay”. Iyo Kamas oo ku jawaabay “amar baa nalagu siiyey in aan dilo.”
Cibaado, wixii habeenkaa ka dambeeyey iyada iyo Alaheedee, waxay sheegtay in ay martay dhinaca Dr. Dolal, dhalsho iyo dhagar ay aragtay mid ay tahayba. Waxayna noo sheegtay in labo habeen oo dhan ay iyada iyo Dr. Dolal qol ku soo wada jeedeen, wixii xog ahaa ee ay isweydaarsan kareena ay iswaydaarsadeen. Xiligaas wixii ka dambeeyeyna ay isku aragti ahaayeen, intii uu Somaliya joogay iyo intii uu gudaha Ogadeeniya joogaybana ay telefoon ku wada xidhiidhi jireen.
Iyada oo kaftamaysa qoslaysana ayey Cibaado tidhi “xiligii ugu dambaysay waa la isku kaana xaman jiray aniga iyo Dr. Dolal, arin guur.”
Sheekada oo aad u dheer ma jeclin in ay akhristayaashu ku daalaan waana inoo qayb 3aad iyo ma taqaan Cibaado Maxamed Tarabi?